Athletic Bilbao oo taako u dhigtay hogaamiyaasha horyaalka La Liga ee Barcelona + SAWIRO – Gool FM
Athletic Bilbao oo taako u dhigtay hogaamiyaasha horyaalka La Liga ee Barcelona + SAWIRO
Bashiir February 10, 2019
(Spain) 11 Feb 2019 Kooxda Barcelona ayaa kulan katirsan horyaalka spain ee La Liga la qaadatay kooxda Athletic Bilbao waxa ayna ciyaarta ku soo dhamaatay bareejo oo midkoodna wuu awoodi wayey in hal gool xitaa dhaliyo .
Kulanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan labada ayaana qeebtii koowaad ee ciyaarta bareejo isku dhaafi waayey walow labada koox aya soo bandhigeen kubad loo riyaaqo.
Ciyaarta ayaa dib loo anba qaaday kooxda Barcelona ayaana sameesay isku dayo badan oo ay ku dooneyso in hesho goolka kowaad ee ciyaarta, balse Bilbao ayaa dhankeeda sameeneysay difaacasho wanaagsan .
Atletico oo ku xisaabtameysa in aan marna loogaga adkaan garoonkeeda lixdii kulan ee ugu dambeyey ayaa iska diiday guul ay ka gaarto kooxda Barcelona oo bareejo dhafi weysay sedex kulan oo xiriir ah .
Messi oo safka ku soo bilowday ayaa awoodi waayey in uu kooxdiisa sedexda dhibciod farta ka saaro walow shagi laga muujinayey in uu kulankan ciyaaro karo misane xulusha macalinta qeeb ka soo noqday .
De Marcos oo katirsan kooxda Atheltico ayaa loo tagay kaarka gaduudan daqiiqadii 90-aad ee ciyaarta , Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku soo idlaatay bar baro 0-0 oo ay labada koox ay ku hishiiyeen , waxa ayna ka dhigantahay in Barca aysan wax guul ah gaarin sedexdii kulan ee ugu dambeyey ee ay ciyartay dhamaan tartamada.
Juventus oo guul muhiim ah ay u qalantay ka gaartay kooxda Sassuolo, xili Ronaldo uu shabaqa gaaray+ SAWIRO
Guardiola oo ka hadlay dareenkiisa, kadib xasuuqii ba’anaa ay u geysteen kooxda Chelsea